Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Airbus dia nanambara ny prototype eco-wing voalohany
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Wing of Tomorrow, vatsian'ny ampahany vola avy amin'ny Aerospace Technology Institute any UK, dia programa Airbus transnational feno misy mpiara-miasa sy ekipa manerantany manerana ny tranokala eropeana Airbus, ao anatin'izany i Bremen any Alemana, toerana iorenan'ny ekipa 'Wing Moveables'. Ireo mpanao fihetsiketsehana elatra telo dia hanangona teknolojia vaovao maherin'ny 100 hizaha ny teknikan'ny famokarana sy ny fivoriambe vaovao mba hahatonga azy ireo haharitra.
'Wing of Tomorrow' dia mahatratra dingana lehibe iray miaraka amin'ny fananganana ny prototype elatra lehibe voalohany.
Ny programa vaovaon'i Airbus dia hanatsara ny fahatakarana ny famokarana elatra sy ny indostrialy.
Elatra prototype feno habe telo no hamboarina manontolo eo ambanin'ny programa 'Wing of Tomorrow'.
'Wing of Tomorrow', programa fikarohana sy teknolojia lehibe an'ny Airbus, dia nahatratra dingana lehibe iray niaraka tamin'ny fivorian'ny prototype elatra lehibe voalohany.
Ny programa Wing of Tomorrow dia tsy hizaha toetra ny akora fitambarana farany sy ny haitao vaovao amin'ny aerodynamika sy ny maritrano elatra fa ny tena zava-dehibe dia diniho ny fomba hanatsarana ny famokarana elatra sy ny fananganana indostrialy hamaly ny fangatahana amin'ny ho avy rehefa mipoitra avy amin'ny areti-mandringana ity sehatra ity.
Elatra prototype feno habe telo no hamboarina manontolo: ny iray hampiasaina hahatakarana ny fampidirana ny rafitra; ny iray segondra dia hozahana ara-drafitra mba hampitahana amin'ny maodelin'ny solosaina, raha ny iray fahatelo kosa hivory hanandramana ny famokarana miakatra ary hampitahaina amin'ny maodely indostrialy.
Sabine Klauke, Airbus Chief Chief Officer, hoy izy: Ny haitao avo lenta dia iray amin'ireo vahaolana marobe - miaraka amin'ny solika maharitra maharitra sy hidrôzenina - azontsika ampiharina mba handraisana anjara amin'ny hetahetan'ny decarbonalisation ny fiaramanidina. Wing of Tomorrow dia ohatra iray ihany koa amin'ny fahitana ny fiombonan'ny fiaraha-miasa amin'ny indostria lehibe hanatratrarana ny fandaharam-potoanan'ny sehatra ho an'ny ho avy maharitra kokoa. ”
Wing of Tomorrow, vatsian'ny ampahany vola avy amin'ny UK's Aerospace Technology Institute, dia fandaharan'asa Airbus transnational feno mpandray anjara sy ekipa manerantany manerana ny tranokalan'ny Eoropeana Airbus, ao anatin'izany Bremen any Alemana, toerana misy ny ekipa 'Wing Movables'. Ireo mpanao fihetsiketsehana elatra telo dia hanangona teknolojia vaovao maherin'ny 100 hizaha ny teknikan'ny famokarana sy ny fivoriambe vaovao mba hahatonga ny fiaramanidina haharitra kokoa.
Ny fivorian'ny fivakisan'ny elatra sarotra dia natao tao amin'ny tranokalan'ny Airbus 'Filton, Angletera, izay novokarina tao amin'ny National Composite Center ao Bristol. Ny fonony elatra sy singa lehibe iray avy amin'ny GKN Aerospace - ny Fixed Trailing Edge - dia natolotra tao amin'ny Advanced Manufacturing Research Center, Wales, tranobe ao amin'ny orinasa mpamokatra elatra Airbus any Broughton, Flintshire, hanombohana ny fivoriambe.